ABO – YEROOBLOG
Yerooblog	Horn of Africa, Opinions, Politics	Leave a comment January 24, 2017 January 24, 2017 1 Minute
Yerooblog	News & Views, Oromia &Ethiopia, Politics	Leave a comment March 9, 2016 18 Minutes
Yerooblog	Oromo Protests, Politics	Leave a comment December 30, 2015 2 Minutes
Obbo Baqqalaa Garbaa, Itti Aanaa Dura Taa’aa Kongirasii Federaalistii Oromoo (KFO) kan ta’an, gidduu kana kitaaba Maartiin Luuter Xiqqaa Ka ta’e “I have a Dream” jedhu gara Afaan Oromootti hiikaniI gabaarraa oolchaniiruu. Maqaan kitaaba kanaa ‘ Mula’atan Qaba’ kan jedhudha. Hojjiin Obbo Baqqalaan hojjetan kun hogabrruu Oromoo keessatti bakka guddaa kan qabudha.
Barreefamoonni/kitaabonni afaan biraatiin barreeffaman gara Afaan Oromootti jijjiranii dubbistootaaf dhiyeessuun haga kan barame miti. Kitaabota afaan biraatiin barreeffaman gara Afaan Oromootti jijjiiruun/deebisuun, uummanni Oromoo beekumsa, muuxannoo fi odeeffannoo akka argatuufi jireenyaa akkasumas qabsoo gochaa jiru keessatti hedduu isa gargaara jedheen amana.
Hojii Obbo Baqqalaa Garbaa hojjetan Oromoota Kitaabota afaan biraatiin barreeffama (keessumaa kanneen Ingilifaan barreeffaman) Afaan Oromootti hiikuu/jiijjiiruu barbaadaniif fakkeenya guddaadha. Hojii Obbo Baqalaa hojjetanirraa wanti barachuu dandeenyu qabsoon Oromoo kalatti hundaan ta’u akka qabudha.
Hundi keenya akka beeknutti, Obbo Baqqalaa Garbaa, namoota qabsoo Oromoon gochaa jiru keessatti adda durummaan nama aarsaa guddaa kaffalaa jiranidha. Mootummaan biyya bulchaa jiru garuu, ati miseensa Adda Bilisumma Oromoo(ABO) ti kana malees warra Amnesty International wajjin walqunnamtee odeefannoo soba laateefiitta jechuudhaan mana hiidhaatti isaan darbate. Obbo Baqqalaan waggoota afurii oliif mana hidhaa ADWUI keessatti erga dararamaa turanii booda ji’a jaha dura gad lakkifamuu isaanii kan yaadanudha. Hidhamuuf kan dirqaman, yakka raawwatanii osoo hintaane, mirga Oromoo kabchiisuuf waan qabsoo godhaniifi qofa.
Haata’u malee, Obbo Baqqalaan erga mana hiidhaatii bahanis booda qabsoo uummata Oroomoof godhan, kuttanoodhaan itti fufan malee sodaatanii duubatti hindeebine. Kunis, hiidhamuu fi dararamu sodaatiin mirga Oromoof falamuu akka hindhiifne iffatti muli’isinuu isaanii agarsiisa.
Nutis akkuma Obbo Baqqalaa mirga uummata keenya kabachiisuuf kalatti kamiinuu kottanoodhaan falmuun nurraa eegama. Kana goochuu baannaan, roorroo halagaa jalaa yoomiyyuu bahuu hindandeenyu.
Yerooblog	Freedom of Expression	5 Comments November 18, 2015 December 25, 2015 1 Minute
Yerooblog	Oromia &Ethiopia, Politics	Leave a comment October 31, 2015 December 25, 2015 2 Minutes
Yerooblog	News & Views, Oromia &Ethiopia, Politics	Leave a comment October 27, 2015 December 25, 2015 1 Minute
Yerooblog	Oromia &Ethiopia, Politics	Leave a comment October 17, 2014 December 25, 2015 2 Minutes
Yerooblog	Politics	Leave a comment September 19, 2014 December 25, 2015 3 Minutes